USA/Sacuudi Carabiya: Heshiiska hub qiimihiisu gaarayo $ 670 malyuun – Kasmo Newspaper
USA/Sacuudi Carabiya: Heshiiska hub qiimihiisu gaarayo $ 670 malyuun
Updated - March 23, 2018 8:34 pm GMT
London (Kasmo), Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka ‘State Department’ ayaa sheegtay in ay oggolaatay kunturaad hub qiimihiisu gaarayo $ 670 Malyuun oo Dollar looga iibinayo dalka Sacuudi Carabiya.
Heshiiska waxaa la saxiixay maalintii Khamiista, 22 March, ka dib kulan dhexmaray Dhaxalsugaha Sacuudiga Maxammed bin Salmaan iyo Xoghayaha Gaashaandhigga Maraykanka, James Mattis.
Hubka laga hadlayo waxaa ka mid noqon doona 6,700 oo Gantaallada nooca ‘Raytheon’ , lidka Taangiyada iyo qalabka dayactirka Helikobtarrada lagu farsameeyay USA ee Sacuudigu horey u haysteen.
Labada mas’uul ayaa kulankooda uga dooday xaaladda nabadgalyada Bariga Dhexe, iyada oo laga shidaal qaadanayo halista Golaha Iskaashiga Khaliijku wajahayo, gaar ahaan ololaha dagaal ee Sacuudigu ka wado Yaman.
Kulammadaas waxay qabsoomayaan inta ay socoto booqashada rasmiga ah ee bin Salmaan ku joogo Maraykanka oo soo bilaabatay maalintii Isniinta 19kii March.
Maalintii ka horreysay kulanka Mattis, bin Salmaan wuxuu la soo kulmay Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, oo ay ka wada hadleen danaha ka dhexeeya iyo xiriirka 2 geesoodka ah.
Arrimaha muhiimka ah ee ajendaha maalmeedka waxaa ka mid ahaa heshiisyada Militariga, maalgashiga Sacuudigu ka wado dalka Maraykanka iyo iskaashiga dhanka nabadgalyada.
Sida ‘New York Times’ xusayo, heshiiska iibka hubka waxaa la marin doonaa doodda Congress-ka, kaas oo toddobaadkii hore ku gacan sayray soo jeedintii Xisbiyada (Bipartisan) ee Washington in ay joojiso taageerada duqaymaha Riyadh ee Yaman.